Midowga musharaxiinta oo taageray Go’aankii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Midowga musharaxiinta oo taageray Go’aankii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed
Midowga musharaxiinta oo taageray Go’aankii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed
Musharaxiinta ayaa Go’aan geesinimo leh ku tilmaamay midkii saddexda maamul Goboleed ka qaateen muddo kororsiga, kadib War-saxaafadeed goor dhow kasoo baxay Midowga Musharaxiinta.
Golaha ayaa sheegay in Qoorqoor, Cali Guudlaawe iyo Lafta-gareen ay muujiyeen danqasho iyo u turis shacab, kadib tallaabadii ay kaga soo horjeesteen muddo kororsiga sharci darrada ahaa ee loo sameeyay Farmaajo.
Sidoo kale Musharaxiinta ayaa shegay inay ku kalsoon yihiin Go’aanka ay qaateen shanta dowlad Goboleed ee dalka, isla markaana uu dalka u horseedi karo in colaadaha jira lasoo afjaro, lana qabto doorasho heshiis lagu yahay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayey Musharaxiinta uga digeen in Ciidamada Qalabka Sida uu u adeegsado danahiisa siyaasadeed, iyagoona ugu baaqay inay ka waantoobo arrintaas.
Midowga musharaxiinta oo taageray Go’aankii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed was last modified: April 27th, 2021 by Admin